Dadka waawayn ee Uberflip waxay qaateen qaab dhammaystiran oo ku saabsan sida loo xisaabiyo xisaabtaada ku soo noqoshada suuq geynta maalgashiga, waxayna ku ridayaan boggan uber qabow. Caannimada suuq-geynta waxyaabaha aan la dafiri karin. Sida laga soo xigtay Machadka Suuqgeynta Macluumaadka, in ka badan 90% noocyada ayaa durbaba maalgashi ku sameynaya eBooks, fiidiyowyo, warbaahinta bulshada, baloog garaynta, iyo kanaalo kale. Si kastaba ha noqotee, in ka yar kalabar iyaga ka mid ah ayaa si sax ah u yaqaan sida loola socdo guusha dadaalkooda. Taladayda kaliya ayaa ku saabsan
Blogging Corporate for Dummies waa tan!
Axad, Agoosto 8, 2010 Axad, Juun 22, 2014 Douglas Karr
Waxaan noqon karin farax ka badan! Toddobaadkan, nuqulladii ugu horreeyay ee Blogging Corporate for Dummies ayaa nala geeyay. Kuuma sheegi karo dareenka sharafta leh ee aan ku leeyahay furitaanka sanduuqa oo aan arko magacyadeenna oo ku daabacan jaldiga hore. Blogging Corporate for Dummies waxay ka badan tahay bogagga 400 ee macluumaadka cajiibka ah - ma ahan dhagax dhagax laga daayay rabitaankeenna ah inaan ku qoro buugga baloog garaynta ugu fiican shirkadaha. The
Kani waa fiidiyowgii labaad, oo ay weheliso Chantelle Flannery, fiidiyowyadayada qoraaga ah ee loo soo saaray sii deynta Blogging Corporate for Dummies. Horaantii maanta, waxaan daabacnay fiidiyowgii ugu horreeyay, oo leh Douglas Karr. Hadafyadeena fiidiyowyada iyo ku daridooda barta Talooyinka Blogging Corporate waxay ahaayeen: In aan dhiirrigelino sii deynta buugga, Blogging Corporate For Dummies. Dhiirrigelinta barta iyo bar-qorista shirkadaha ee Twitter iyo Facebook. Kor u qaad Chantelle iyo aniga oo la hadlaya oo aan wax barno shirkadaha
Rocky Walls iyo Zach Downs oo ka socda laba iyo toban xiddigood Media ayaa u soo degay DK New Media xafiiska iyo fiidiyowga la duubay ee Chantelle iyo aniga oo ah fiidiyowyo dhowr ah oo aan dooneynay inaan dhigno bogga Talooyinka Blogging Corporate Tani waxay ahayd kulan fantastik ah. Waxyaabaha ku jira midkoodna lama qorin ama lama aqbalin. Waxaan dib u eegnay yoolalkayaga ka hor toogashada: Dhiirrigelinta sii deynta buugga, Blogging Corporate For Dummies. Dhiirrigelinta goobta iyo barta internetka